မေ – Grab Love Story
” ဟဲ့..စောက်ပတ်ကြီးပြဲ…ပလုပ်တုပ် လီးက အကြီးကြီးပဲတော့..အဲ..ခိခိ “
ရှေ့ကဈေးဝယ်နေတဲ့ လူကြီး ထွက်သွားတော့ အနားရောက်နေတဲ့ ခင်ခင်ဆိုတဲ့ တစ်ခုလပ် ကောင်မလေးက ခါးတို့လိုက်တာနဲ့ မချိုရီရဲ့ ပါးစပ်က ထုံးစံအတိုင်းပဲ ယောင်ပြီးအော်ရင်း ခါးတွန့်လိုက်မိသည်။ အော်လိုက်မိပြီးမှ အဲဒီလူကြီး ကြားသွားမလားလို့ တွေးမိပြီး ပါးစပ်ကို လက်ဖဝါးနဲ့ အချိန်မီ အုပ်လိုက်ပေမယ့် နောက်ကျသွားလေသည်။ စပ်ဖြီးဖြီးကြီးနဲ့ အဲလူကြီးက တစ်ချက်လှည့်ပြီး ကြည့်တော့ ခင်ခင့်ပေါင်တွင်းကြောကို ဆွဲနှိုက်လိမ်ရင်း အရှက်ပြေ မျက်နှာလွှဲလိုက်ရပေမယ့် တစ်ခစ်ခစ်နဲ့ အရှက်က မပြေနိုင်ဘူး။ ပျံကျဈေးသည်ဆိုတော့ သိပ်အကြာကြီးလည်း ရှက်မနေအားတော့ပါဘူး ရုန်းနေတဲ့ ခင်ခင်နဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုး ယွပိုး ထိုးနေကြရင်း ပွစိပွစိ လုပ်နေမိကြတာနဲ့ ရှက်ဖို့မေ့သွားလေသည်။
အဲလူကြီးကလည်း အဲလူကြီးပဲ.. ဈေးဝယ်သလို ဈေးမေးသလိုနဲ့ မချိုရီရဲ့ မပေါ်တစ်ပေါ် နို့လုံးကြီးတွေကို ထိုင်ကြည့် နေလိုက်တာများ သူ့ကိုယ်သူ အောက်စ ဖုံးဖို့တောင် သတိမထားနိုင်တော့ဘူး.ခ်ခ်..
လီးကြီးပေါ်နေတာမှ ငိုက်စိုက်တွဲလောင်းကြီး.. ဟီးဟီး။ သိပ်အကြီးကြီး မဟုတ်လှပေမယ့် အိမ်က အဖိုးကြီးထက်တော့ နည်းနည်း ပိုထွားနေသလားလို့ မချိုရီပြူးပြဲပြီး ဟိုအသီးဒီရွှေ့ ဒီအရွက် ဟိုရွှေ့လုပ်ရင်းနဲ့ သေသေချာချာ လေ့လာနေတုန်း စက်ချုပ်ဆိုင်က ခင်ခင်ကလည်း ရိုးတိုးရိပ်တိတ်မြင်လို့ လာကြည့်တာကိုတောင် သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ထူးထူးခြားခြား မနက်က အဖိုးကြီး လင်းဆွဲတစ်ချီ အဆွဲခံလိုက်ရတာမို့ ဈေးဖွင့်အမီဆိုပြီး နို့ဗလာကြီးပေါ် စပို့ရှပ်လေး ကောက်စွပ်ပြီး ထွက်လာခဲ့ရတာဆိုမှတော့ နို့ကြီးတွေ ပြူးထွက်နေမယ်ဆိုတာ သိတော့သိလေသည်။ သူက ကိုယ့်နို့ခိုးကြည့်.. ကိုယ်က သူ့လီးခိုးကြည့်နဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးက လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ် ဖြစ်လာတုန်း ခင်ခင်က ဝင်ထိုင်တော့ ဟိုလူကြီး ပိုက်ဆံတွေ အယောင်ယောင် အမှားမှားပေးပြီး ထ,သွားရော။
” ခိခိ..ပြဲလောက်ပါဘူး အစ်မချိုရီရဲ့ ပုံမှန်လောက်ပါ ဟီး သိပ်အကြီးကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး..”
မချိုရီက သူ့ပေါင်တွင်းကြောကို နှိုက်ဆွဲလိမ်နေရာက စောက်ဖုတ်ကြီး ပိတ်နှိုက်ဆွဲပစ်တော့ အမွှေးကြမ်းကြမ်းတွေ ဖုံးနေတဲ့ ခင်ခင့်စောက်ဖုတ်ကို အုံလိုက်ကြီး ဆွဲမိလိုက်သည်။ ခင်ခင်ကလည်း ရုန်းသလိုလို
တွန်းသလိုလိုနဲ့ သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ် ခပ်ကြာကြာလေး ဖိတင်ပေးထားတာ.. ဘေးကဈေးသည်တွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ မိန်းမနှစ်ယောက် ဟီးလားထနေကြတယ်လို့ပဲ ထင်ကြမှာပေါ့။
” ကောင်မ..ဒါမျိုးကျ မြင်တတ်တယ်.. ခိခိ.. ညည်း အရည်တွေတောင် ထွက်နေပြီ..ခ်ခ်..”
ခင်ခင်က မျက်စေ့လေး ပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာနဲ့သပ်ရင်း
” လီးနဲ့မတွေ့တာကြာပြီလေ အစ်မရဲ့..ဟီးဟီး.. မမြင်ရတာကြာလှပေါ့..နှစ်တွေချီနေပြီ အခုမှ ပြန်မြင်လိုက်ရတာ..ခိခိ.. လီးလဒစ်ကြီးက ပြူးအိနေတာပဲနော် “
စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ချောင်းဖျားလေးတွေ ဆော့နေရင်း
” နင့်စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း ဖောင်းအိနေတာပဲဟယ်.. အဲဒီလဒစ်ကြီးသာ ထိုးထဲ့လိုက်ရင်တော့ မြုပ်နေမှာ.မြင်ယောင်မိပါရဲ့ လင်နဲ့ကွဲပြီးတဲ့နောက် ဘယ်သူ့မှ နင်မကုန်းခဲ့ဘူး.. ဟလား “
ခင်ခင်က သူ့စောက်ပတ်ကြီးကို ဆွပေးနေတာ မခံစားနိုင်တာလား.မဖြေချင်တာလားမသိဘူး… မချိုရီ့အမေးကိုပြန်မဖြေပဲလက်ကိုဆွဲဖယ်ရင်း..
” တော်တော့ အစ်မရယ်..လိုးပေးမယ့်လူ မရှိပါဘူးဆိုနေမှ ခိခိ..တအားမဆွနဲ့.. ကိုထူးနဲ့ သွားခံပစ်မှာနော..ဟီးဟီး “
မချိုရီမှာက ဆယ့်ကိုးနှစ်လောက် သားတစ်ယောက်ရှိလေသည်။ ဆယ်တန်းကို အခုထိမအောင်နိုင်သေးပဲ ထပ်ဖြေမယ်ဆိုပြီး
ဝေလေလေနဲ့ ဘောလုံးကန်လိုက်..အရပ်ထဲ လည်လိုက် လုပ်နေလေသည်။ သူ့အရပ်အမောင်းက မအေတူမို့ ခပ်ထွားထွားနဲ့ အားကစားတော့ ထူးချွန်သား..။ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး.. ခင်ခင်က တစ်ခုလပ်ဆိုပေမဲ့ ရုပ်ရည်လေး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လေးက မဆိုးတော့ အချောင်ဖန်တဲ့လူတွေ အတည်ကြံတဲ့လူတွေ အများကြီး။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အသက်က သုံးဆယ်သာသာနဲ့ ကလေးမရှိတဲ့ တစ်ခုလပ်ဆိုတော့ အထာက ခပ်ကျွမ်းကျွမ်း.. လစ်ရင်လစ်သလို အလိုးခံဖို့ မနှေးတဲ့သူ.. စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီထဲမှာ သူ့သားကို သွားစ,မိလိုက်လို့ ကောင်လေးက အူတူတူနဲ့ လိုးမိသွားပြီး တန်းတန်းစွဲသွားရင် ခက်များ ခက်ရချည်ရဲ့.။ခင်ခင့်စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကိုင်ခဲ့.. ပွတ်ခဲ့မိတာ များလှပြီမို့ လိုးလို့ကောင်းမယ့် စောက်ဖုတ်အလတ်ကြီးမှန်း မချိုရီကသိနေတယ်
” ဟဲ့..ကလေးကို နို့နံ့တောင် မစင်ချင်သေးဘူးနော် ကောင်မ သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့..”
ခင်ခင် တခိခိရယ်ရင်း မချိုရီခါးကို ကလိထိုးနေတော့ တွန့်တွန့်လူးအောင်
” ဒီအရွယ်ထိ နို့နံ့မစင်သေးဘူးဆိုရင် အစ်မက ဇွတ်စို့ခိုင်းနေလို့ပဲဖြစ်ရမယ်..ဟီးဟီး.. သားအမိချင်း လူမသိသူမသိ ခိုးကျွေးနေမှန်းမှ မသိတာ ဟီးဟီး…ခင်ခင်တော့ လစ်ရင် ကိုထူးနဲ့ ကုန်းပစ်မှပါပဲ “
ခင်ခင်က စ,တာဆိုပေမယ့် ချိုရီ မျက်ခုံးလှုပ်သွားလေသည်။
” အဲ.. သားအမိချင်း ခိုးကျွေးစရာလားဟဲ့.. ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း..ခိခိ.
ခင်ခင်က သူတို့ဆိုင်နဲ့ မျက်စောင်းထိုး အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖင်ကြီးကြီး နို့ထွားထွား အသားညိုညို မိန်းမကြီးဖက်ကို မသိမသာ မေးငေါ့ပြပြီး
” ဒေါ်ကေသီနဲ့ သူ့သား လိုးနေကြတာ တစ်ဈေးလုံးသိတယ် မမ..ဟီးဟီး လိုးလို့မှ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ဗိုက်ရှိနေပြီ ခိခိ.. ကိုယ့်အိပ်ယာထဲမှာ ကိုယ်ဘယ်သူနဲ့ အလိုးခံနေမှန်း ဘယ်သူက လာမြင်မှာမို့လဲ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဘာမှမဆန်းဘူး..လာမပြောနဲ့..ခိခိ “
မချိုရီ ငိုင်ဆင်းသွားသည်။ ဟုတ်နေတော့လည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး။
ဈေးအိမ်သာ ကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့ ဒေါ်မြမေကြီး ဆိုတာလည်း သူ့သားနဲ့ သူကုန်းနေတာ တစ်ဈေးလုံးအသိ။ အိပ်ယာထဲကို
လိုက်ကြည့်လို့ မရတော့လည်း သိတယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရပ်နေရလေသည်။
” ဘာဆိုင်လဲဟယ်..သူတို့ဟာ သူတို့ သားအမိချင်း လိုးတာ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ နင်သာ ငါ့သားကို သွားမဆွနဲ့ ဒါပဲ “
ခင်ခင်က အချက်ပိုင်ပြီဆိုတဲ့ အပြုံးနဲ့
” အဲဒါကိုပြောတာပေါ့ အစ်မရဲ့..အစ်မက မကျွေးချင်လို့ မကျွေးတဲ့ ချာတိတ်ကို ကျွန်မက အလွတ်ကုန်းပါ့မယ်ဆိုတာက အပြစ်လားလို့.. ခိခိ..”
” ကုန်းဟယ်.. ကုန်း.. ဒီလောက် ကုန်းချင်နေရင်လဲ နင့်အဖေနဲ့ပါ သွားကုန်း “
” ခိခိ..အဖေ့ကို ကုန်းပေးခဲ့ပြီးတာဖြင့်
ခင်ခင်က ခပ်ရွရွ။ ဆယ့်ခြောက်နှစ် ပြည့်အောင်တောင် ခံပါ့မလားလို့ ပြောယူရတဲ့အထိ ရွခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ သူ့အသက် နှစ်ဆယ်ပြည့်တော့မှပဲ လင်ယူဖြစ်တာပါ။ တရားဝင်မဟုတ်ခဲ့တဲ့ လင်တွေကတော့ အများကြီးပဲ။ ဆယ့်ငါးနှစ်သမီးလောက်ကစ,ပြီး အလိုးခံခဲ့ဖူးတာဆိုတော့ ခြောက်နှစ်လောက် အသားလွတ်ကုန်းပြီးမှ လင်ယူခဲ့တာ။ ကျောင်းမှာ
ဆယ်တန်းလောက်အထိ ရည်းစားတွေ အစီအရီထားပြီး ကုန်းခဲ့ဖူးတော့ လီးအကြီး.
လီးအသေး အရှည် အတို အရသာ ကွာတာတွေ သိခွင့်ရခဲ့သလို ကျောင်းသားနဲ့ဆရာ အနုနဲ့အရင့် လိုးပုံချင်းကွာတာကိုလည်း နောကျေနေအောင် သိခဲ့ရလေသည်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ဘဝဆိုတာက အားလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်း အချိန်ပြည့် လွတ်လပ်တာ မဟုတ်သလို အပျော်သဘောလည်း ဆန်နေတော့ အမြဲအလိုးခံနေရတာ မဟုတ်ဘူးလေ အလစ်မျိုးစုံချောင်းပြီး ပိုင်မှ အလိုးခံရဲတာဆိုတော့ တစ်လနေမှ တစ်ချီနှစ်ချီပဲခံရလေသည်။ ရည်းစားထားမိတဲ့ သူကလည်း ကျောင်းပညာသင်ဆဲ ဖြစ်နေသလို အလိုးပညာသင်ဆဲ ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲ ကြုံရတာတွေ များလာတော့ အလိုးခံရတာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိတာပဲ များပါတယ်။ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ကြီး စွဲသွားလောက်အောင် အလိုးမခံခဲ့ရဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းကထွက်ပြီး စက်ချုပ်သင်ပြန်တော့ သူ့ပုံစံ သူ့မျက်နှာပေး မြင်ရုံနဲ့ အလိုးခံချင်နေတဲ့သူမှန်း သိလွယ်လို့ လာဖန်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပေါ့။ အပြင်လောက စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ ရှာပေါင်းပြီး ပျိူပျိုအိုအိုမရွေး.. သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်ညှိပြီး အလိုးခံလိုက်ရတော့မှပဲ
လီးအရသာ လိုးအရသာကို ထိထိမိမိ သိရတော့သည်။ အဲဒီတော့မှပဲ တစ်ခုလပ်တို့
အလိုးကျွမ်း အလိုးသန်မှန်းသိပြီး လူပျိုဆို လုံးဝ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ မျက်စေ့မှေးပြီး တစ်ချက်ကြည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ စားနေကျ ကြောင်ဖားကြီးတွေက ချက်ချင်းကပ်ဖို့
အထာနပ်ကြသလောက် လူပျိုတွေက အတော်လေးညံ့ကြမှန်း ကြာလေသိလေ ဖြစ်လာတော့ လူပျိုဆို လှည့်ကိုမကြည့်တော့တာ။ ကိုယ်က ရည်းစားထားချင် လင်ယူချင်လို့မှ မဟုတ်ပဲ အထာနပ်နပ်နဲ့ လူမသိသူမသိ အလိုးခံချင်ရုံ သက်သက်ပဲဆိုတာ ကိုလူပျိုတွေက သဘောပေါက်မလွယ်ပဲ လူအိုတွေက ချက်ချင်းသိ သိသွားကြတာ ဘာသဘောလဲတော့မသိဘူး။
ဖြစ်ပုံက ရယ်လည်း ရယ်ချင်တယ်။ သူတို့ကို လှည့်မကြည့်တော့မှပဲ ကိုလူပျိုတွေ အကြားမှာ ခင်ခင်က ခူးရခက်တဲ့ ရွှေသဇင်ဖြစ်သွားပြီး တန်ဖိုးတွေက စွတ်ပြီးတက်ရပြန်သတဲ့..ခ်ခ်။ဒီစောက်ပတ်ကဖြင့် လီးအချောင်း နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်. ခြောက်နှစ်ကျော်ကျော် အဆော်ခံနေတာ ရွဲနေပြီ။ ဒါပေမယ့်လေ.. သိတယ်မလား.. ခိုးစားရတာဆိုတာမျိုးက နေ့တိုင်း ညတိုင်း အလိုးခံနေရတာမှမဟုတ်ပဲ.. လစ်လှပါပြီဆိုပါမှ နှစ်ချီ..သုံးချီဆိုတာ အများဆုံးလေ။ တစ်ချီကောင်းလောက် အလိုးခံရတာမျိုးသာ ခပ်များများဆိုတော့ ခင်ခင့်ဘော်ဒီက လုံးဝ မကျတဲ့အပြင် သူတို့လီးရည်နဲ့ တည့်လို့လားတော့မသိပါဘူး. အရပ်ကမြင့်မြင့်နဲ့ ဖင်တွေနို့တွေဆိုတာ တင်းကား ပြူးမို့ပြီး လုံးထွက်နေတာမှ အိနေတာပဲ။ အဲဒီလို လူတကာ လိုးချင်စရာပုံစံနဲ့ လူပျိုတွေကို အကပ်မခံတဲ့ သတင်းတွေ ပျံ့လာတော့ မြို့ဘေးနားရွာက မိန်းမစောက်ပတ်မမြင်ဖူး မလိုးဖူးသေးတဲ့ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်က ဇွတ်အတင်းပဲ ရွှေတစ်ဆင်စာတွေ ဆိုင်ခန်းတွေ အိမ်ခန်းတွေနဲ့ လာတင်တောင်းပစ်တာ အမေတို့
အပျော့ဆွဲလေးနဲ့ စောက်ပတ်ယက်ပေးတဲ့ အဆင့်အထိပါ အလိုးပညာတွေ တွဲပြီးသင်ပေးလိုက်တာ..နှစ်ယောက်လုံး အားတယ်လို့ မရှိတော့ပါဘူး။ ညတိုင်း တဖုန်းဖုန်း တစွတ်စွတ်လိုးတော့ နှာကြီးလှတဲ့ အမေတောင်မှ တရားစခန်း ပြေးရတဲ့ဘဝ ရောက်သွားလေသည်။ လူပျိုကြီးအသက်က ခင်ခင့်ထက် ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် ကြီးနေတော့ အမေနဲ့ အသက်က သိပ်မကွာဘူး။ အဖေကတော့ အော်နေညည်းနေသံတွေ တစ်ညလုံး ကြားနေရတာ သနားလို့လား မသိပါဘူး မနက် မျက်နှာချင်းဆုံတိုင်း သိပ်မကြည်ချင်ဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ်ကသာ အလိုးခံရတာကို ကြိုက်လွန်း…မဝ,နိုင်လွန်းသလို သူ့လီး သေးလွန်းတာကိုလဲ အားမရလွန်းလို့ အော်မိ ညည်းမိတာပါ.။ အသံကြားရတဲ့ အဖေ့အထင်မှာတော့ နာလို့ အောင့်လို့ အလိုးမခံချင်တော့လို့ အသံကုန် အော်နေ ငြင်းနေ ညည်းနေရရှာတယ်လို့ပဲ ထင်နေတာ ကိုယ်က မသိခဲ့မိဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အလိုးခံပြီး လီးဆိပ်မွှန်နေခဲ့လို့ သတိမထားမိခဲ့ပေမယ့် တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာတော့ မနက်အိပ်ယာထ,လို့ အဖေနဲ့ဆုံမိတိုင်း အဖေ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက ခင်ခင့်နို့လုံးတွေ.. လီးရည်ကွက်နေတဲ့ ထမီနောက်ပိုင်းတွေ.. ပေါင်ကြားတွေမှာ အမြဲလိုလိုပါပဲလားလို့ သတိထားမိလာလေသည်။ သေချာအောင် အင်္ကျီကျယ်သီး တစ်လုံးနှစ်လုံး ဖြုတ်ထားပြီး ထမီကိုကပိုကယို ဖော်ထားကြည့်လိုက်တော့ ခင်ခင့်နို့လုံး ပြူးပြူးဖူးဖူး အိအိကြီးတွေ.. လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ ဖင်ဆုံကြီးတွေ..စောက်ပတ်နဲ့
တည့်တည့် ပေါင်ကြားတွေကို ကြည့်နေတာ သေသေချာချာ မိလိုက်လေသည်။ မနက် ဆုံကြတိုင်း သူ့လီးက ဖုဖုဖောင်းဖောင်း
ထိုးထောင်နေတတ်တာကိုလဲ မြင်လာရသည်။ ယောင်္ကျား နှစ်ဆယ် အစိတ်ကျော်နဲ့
အလိုးခံလာတဲ့ မိန်းမဆိုတော့ အဖေ့ပါးစပ်က ဘာမှဖွင့်မပြောပေမယ့် ကိုယ့်ကိုလိုးဖို့
စိတ်ကူးယဉ်နေ..မြှူပြနေပြီဆိုတာ အရိပ်မြင်ရုံနဲ့ ခင်ခင်သဘောပေါက်နေပြီမို့ ငြိမ်ပြီးစောင့်နေတာ။
လင်မယား အသားကျသွားတော့ အမေက တရားစခန်း သိပ်မသွားတော့ဘူးလေ။
အဲဒီတော့မှပဲ အမေတို့အခန်းက မကြားရခဲ့တဲ့ လိုးသံဆောင့်သံ.အော်သံညည်းသံတွေ ခင်ခင်တို့နဲ့အပြိုင် ထွက်လာတာကို
ရက်ခြား ရက်ခြားလေး ကြားလာရတော့သည်။ အဖေ့ကို ကြည့်ရတာ အမေ့ကို လိုးနေရတာနဲ့ မတင်းတိမ်ပဲ ခင့်ကိုလည်း လိုးချင်ပုံရလေသည်။ မနက်တိုင်း ခင်ခင့်ဖင်တွေ စောက်ပတ်တွေ နို့တွေကို အသေငမ်းပြီး လီးတောင်နေတာချည့်ပဲ တွေ့နေရသည်။ ခင်ခင်ကလည်း အဖေ့လီးတောင်နေတာကြီးကို ပြန်ငမ်းမိတာပေါ့။သူငမ်းတာကို ကိုယ်မိသလို.. ကိုယ်ငမ်းတာကိုလည်း သူကမိသွားတဲ့အခါ သားအဖနှစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ပြုံးမိကြလေသည်။ အိမ်ထောင်ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ ရှက်မနေပဲ ဖွင့်ချကြတာပါပဲ
” အဖေလီးကြီးကလဲ မနက်အစောကြီး တောင်နေလိုက်တာ ကြည့်မဝ ရှုမဝ..မတ်နေတာပဲ ဟီဟိ…တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီးလား မသိဘူး ခ်ခ် “
” သမီးယောင်္ကျားလီးရော မတုတ်လို့လား.”
” သူ့လီးက သေးသေးလေးဖေရဲ့.. အားမရလို့ အော်ခံနေရတာ “
” အင် အဖေ့လီးလောက် မတုတ်ဘူးလား “
” ခိခိ..လီးပြကြည့်လေ “
မျက်နှာနီနီ မျက်လုံးရွဲရွဲ နှုတ်ခမ်းက ခပ်စေ့စေ့လေးပြုံးပြီး ခင်ခင်က လီးလှန်ပြခိုင်းနေတော့ အဖေမချင့်မရဲဖြစ်လာပြီး အပြင်ခန်းနဲ့ဘေးဘီကို မျက်လုံးတစ်ချက် လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။ လီးကြီးက ထောင်းကနဲ
ထောင်းကနဲ ခုန်ခုန်တက်နေတာကို အနီးကပ်မြင်နေရတော့ ခင်ခင့်နှုတ်ခမ်းတွေက
ထူပိန်းလာပြီး အာခေါင်တွေ ခြောက်သွေ့လာသည်။ သူ့စောက်ဖုတ်က အလိုက်မသိပဲ စောက်ရည်တွေ ထွက်နေတာတော့
လျှာနဲ့သပ်..လျှာပေါ်မှာ အလိုလိုစုလာတဲ့ တံတွေးတွေကို ဂလုကနဲမျိုချမိပြီး.. လေသံတိုးတိုးနဲ့
” ဘယ်သူမှမလာလောက်ပါဘူး..ဟိုလူက ခုမှတစ်ချီလိုးပြီးအိပ်သွားလို့ သမီးထွက်လာတာ.. အမေလည်းအိပ်နေတုန်းနေမှာ..ပြ..ပြ..မြန်မြန်ပြ..အဖေ့လီးကြီးကမြွေဟောက်ကြီးလိုပဲ..ထောင်ထောင်တက်နေတာ..မြင်ချင်လှပြီ “
အဖေကမြန်တယ်။ ပုဆိုးခါးပုံစ,ကို ဖျတ်ကနဲ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲဖြည်ပြီး ပုဆိုးပြင်ဝတ်သလိုနဲ့ အောက်လျှောပြလေသည်။ လီးကြီးက ခြောက်လက်မကျော်ကျော် ရှိမလားမသိဘူး.. တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး လဒစ်ပြူးပြူးကြီးက ပြောင်လက်နေသည်။ လီးမွှေးတွေကြားမှာ သွေးကြောတွေ ထင်းထင်းနဲ့ တင်းတင်းမတ်မတ်ကြီး တောင်နေတာ သံချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးလိုပဲ။ တွဲလွဲကျနေတဲ့ ဂွေးဥကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း အူယားစရာကြီး မြင်ရတာ ကြည့်လို့မဝ,နိုင်ဘူး။ ခင်ခင့်ကို လိုးဖူးတဲ့ လူတွေထဲမှာ အဖေ့လီးမျိုး နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်လေသည်။
” အီးဟီး..ရှီး ကျွတ်ကျွတ်.. လီးကြီးက အဲလောက်ကြီး တုတ်ခဲမာတောင်နေပါလားနော်.. သမီးလက်နဲ့ ဆုပ်ရင်တောင် မီမှာမဟုတ်ဘူး..”
အဖေက ပုဆိုးကို ပြန်ဝတ်ပစ်လိုက်လို့ အကြာကြီး မမြင်ရတော့ပေမယ့် မျက်စေ့ထဲက ဖျောက်လို့မရတော့အောင် စွဲသွားမိသည်။ ကိုယ့်အဖေလီးက အဲလောက်ကြီး စံချိန်မီနေတာ တွေ့ရတော့ ဂုဏ်လည်းယူမိသလို ကိုယ်မပိုင်ရတာကို သတိရလိုက်မိတော့ အားလည်းလျော့သွားမိသည်။ အမေကတော့ ဒီလီးကြီးနဲ့ တစ်သက်လုံးက အလိုးခံလာခဲ့ရတာ ညတိုင်းဇိမ်ကျနေမှာပဲ သူသာဆို တစ်ညတောင် ခွဲအိပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးနေမိလေသည်။ အဖေ့ အသက်ကသာ ငါးဆယ့်လေးကျော်နေပြီလို့ ဆိုပေမယ့် သူ့လီးကြီးကတော့ မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် နုပျိုသန်မာ
” ကြီးလိုက်တာအဖေရယ်..တုတ်ခဲနေတာပဲ.. သမီးက ဒီလီးမျိုးကြီးမှ ကြိုက်တာ အဖေတို့ ပေးစားတဲ့ လင်ရဲ့လီးက အဖေ့တစ်ဝက်တောင် မရှိဘူး သေးသေးလေးမှ တကယ့်သေးသေးလေး “
အဖေက မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ချွေးသီးတွေနဲ့ နှာခေါင်းကြီးက နီရဲနေပြီ။ သူခင်ခင့်ကို လိုးချင်နေတာ သိနေပေမယ့် ခုထိ ဖွင့်မပြောလာသေးတော့ ပြောစေချင်လှပြီ။ ဒီအချိန်မှာပဲ အဖေ့နှုတ်ခမ်းတွေ တုန်ယင်လာပြီး
” တကယ် သေးသေးလေးလားသမီးရယ်.. အလိုးရောသန်ရဲ့လား..”
စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရနဲ့ တောက်
ခေါက်လိုက်မိတယ်။ ကြားချင်တာက တစ်မျိုး သူပြောလာတာက တစ်ခြားဆိုတော့
” ဟုတ်ပါတယ်ဆို.လိုးနေတုန်းမို့ သူ့လီး တောင်လှပါပြီဆိုတာမှ ငါးလက်မပြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး.. အတုတ်လဲ အဖေ့လီးကြီးရဲ့ တစ်ဝက်တောင်မှမရှိဘူး.. လိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ လက်မလောက်ပဲ.. တိုရှုံ့ရှုံ့နဲ့ သေးသေးလေး..”
ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ရုန်းထွက်နေသည်။
” ဟုတ်ရဲ့လားသမီးရယ်.လိုးနေကြတာများ တဖုန်းဖုန်း တဖတ်ဖတ်နဲ့..သမီးကလဲ အော်နေလိုက်တာ အသံကုန်ပဲ “
ကြားချင်တဲ့စကား မကြားရတော့ လီးကို
” ဟုတ်ပါတယ်ဆို…အသံတွေက ဆီးခုံချင်း.. ပေါင်ခွဆုံချင်း ရိုက်လို့ထွက်နေတာ အဖေရဲ့.. အော်တာကတော့ သူလီးသေးသေးလေးက သမီးစောက်ပတ်ထဲကို ခပ်ချောင်ချောင်ကြီး ရှောကနဲ ရှောကနဲ ဝင်ဝင်နေတာ အားမရလွန်းလို့ မချိမဆန့်နဲ့ အော်ခံနေရတာ သိလား.မယုံရင် ညကျလာချောင်းလေ.တံခါးဖွင့်ထားမယ် “
အဖေ့မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက်လာသလို သူ့လီးထိပ်ဖျားမှာလဲ လီးရည်ကြည်တွေ စို့လာပြီဆိုတာ ပွတ်ပေးနေတဲ့
ခင်ခင့်လက်မထိပ်ဖျားလေးထိ စိုစိစိုစိဖြစ်လာလို့ သိလိုက်တယ်။” လိုးရအောင်”လို့ ကြားရမလား “သမီးစောက်ပတ်ကို အဖေလိုးချင်နေပြီ “လို့ ကြားရမလား မျှော်လင့်တာ..အဖေက တစ်ခွန်းမှ မပြောတော့
” လီးရည်ကြည်လေးတွေတောင် စိမ့်နေပြီ အဖေရယ်.. ဒီလီးကြီးမျိုးနဲ့ ညတိုင်း အလိုးခံနေရတဲ့ အမေ့ကိုတောင်မှ သမီးမနာလိုတော့ဘူး..”
သားအဖနှစ်ယောက်သား ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ ကိုယ်လှိမ့်နေကြတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို
မေ့နေကြတာ.. အနောက်က အမေ့အသံလေး ကြားလိုက်ရမှ လန့်ဖျတ်ပြီး အဖေက အိမ်သာဖက် လစ်ပြေးလေသည်။
” အောင်မယ်..သမီးကများ မအေကို မနာလိုဘူးဆိုတော့ ခိခိ..ငါတော်တော့်ကို
ဟုတ်ရဲ့လား သမီး “
အမေ့ကိုလှည့်ကြည့်ရင်း မချိတရိလေးနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြုံးလိုက်ရပေမယ့် ခင်ခင့်စောက်ပတ်ထဲမှာတော့ စောက်ရည်တွေ အတောမသတ် ထွက်နေတုန်းပဲ..
” သိပ်ဟုတ်တာပေါ့..မေမေက သမီးထက် လှတုန်းပဲမို့ မနာလိုတာ..အခုချိန်ထိ ဖင်အိုးကြီးတွေကလဲ ဖူးကောက်ကားတစ်နေတာ ရှယ်ပဲ..ခါးသေးသေးလေးနဲ့..နို့လုံးကြီးတွေကလဲ အုံလိုက်ကြီးကို ဝန်းဝန်းမို့မို့ အိအိဖောင်းဖောင်းကြီးတွေ..ခ်ခ်..သမီးရဲ့ အမေလို့ပြောရင် ဘယ်သူမှ ယုံကြမှာတောင် မဟုတ်ဘူး..”
တခစ်ခစ်ရယ်ပြီး ခင်ခင့်ကိုလာနမ်းတော့ ခင်ခင်က အမေ့ပါးကို ပြန်နမ်းရင်း အောက်နှုတ်ခမ်းလွှာ ထူထူထွေးထွေးလေးကို ရှေ့သွားလေးတွေနဲ့ ဆတ်ကနဲ ကိုက်ပစ်လိုက်မိသည်။ မေမေက အံ့ဩသွားပေမယ့် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ ညဝတ်ဂါဝန်ကြီးကို ဆွဲဆန့်ပေးရင်း..
” ဟွန်း.သမီးကတော့လုပ်ပြီ..ဘော်လီလည်း ဝတ်မထားဘူး..ဟီဟိ.သူ့နို့ကြီက အမေ့လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်လို့တောင်မှ မကာမိနိုင်တော့ဘူး.. မာတင်းနေလိုက်တာမှ အကြီးကြီး.ဟီးဟီး. သူ့လင်က လိုးနေရင်းနဲ့ တော်တော်စို့ပေး ဆွဲပေးထားတဲ့ပုံပေါ်တယ်..ကြီးတာ “
ခင်ခင်ကလည်း အားကျမခံ မေမေ့ညအိပ်ဂါဝန် တိုနံ့နံ့ ပါးပါးလေးအောက်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားကို လက်လျှိုသွင်းပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို အုပ်ကိုင်ပစ်လိုက်တာ မေမေဖင်တွန့်သွားတယ်..
” အိ..ခိခိ..စောက်မွှေးတွေစိုရွှဲနေတာပဲ.. မနက်အစောကြီး ထ,လိုးထားကြတာမလား.ခိခိ.. လွန်တယ်နော် အမေတို့များ
ခိခိ..စောက်ခေါင်းထဲမှာ ခုထိရွှဲနေတုန်း “
” ဟင်း ဟင်း..ညည်းအဖေလေ..ခိခိ.. လီးရည်တွေ အပြင်မှာထုတ်ပါဆိုမှ.. အားလုံးပန်းထည့်သွားတာ..ခိခိ..သူ့လီးကြီးကို တဆတ်ဆတ်တောင်ခါပြီး ထည့်ပေးသွားလိုက်သေး..ခိခိ “
အိမ်ကယောင်္ကျား သူများမယားကို ပွဲရုံမှာ ခေါ်လိုးနေတုန်း လင်ကြီးနဲ့ မိသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြားရတဲ့ ခဏမှာ ငယ်ထိပ်ကို
မြွေပေါက်ခံလိုက်ရသလို ထူပူသွားလေသည်။ ရွာက သိပ်မဝေးတော့ အဖေနဲ့အတူ ပွဲရုံကို လိုက်သွားတာ ရှင်းလို့မရတော့ဘူး။ သူတို့က ခင်ခင်နဲ့ မညားခင်ကတည်းက လိုးနေခဲ့ကြတာ ကြာလှပြီဆိုတာကို ဟိုရောက်မှ သိလိုက်ရတော့ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ယူကျုံးမရဖြစ်မိလေသည်။ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေက ဒီမိန်းမ တစ်ယောက်ထဲမက,ဘူး..တခြားမိန်းမတွေ နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုလဲ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ခုတုန်းလုပ်ဘန်းပြပြီး လိုးနေတာ ကြာပြီဆိုပါလား။ ဒီသတင်းတွေ ကြားရတော့ လီးသေးသေးလေးနဲ့ အတော်ရှုပ်တဲ့ လူပဲလို့ တွေးမိပြီး တစ်ခါထဲပဲ ကွာရှင်းပစ်လိုက်သည်။ ဒါတောင်မှ မကွာပေးဘူးလုပ်နေလို့ တရားရုံးမှာ ကွာရှင်းခွင့်လျှောက်ယူမယ် ဘာပစ္စည်းမှလဲ မယူဘူးဆိုမှ လူကြီးစုံရာရှေ့မှာ နောက်ရက်မှ ကွာပေးလေသည်။ အမေတို့စိတ်မကောင်း
နိုင်ကြပေမယ့် ခင်ခင့်သဘောကိုပဲ လိုက်လျောကြလေသည်။ ရှင်းရှင်းနဲ့ အမှန်အတိုင်းပဲ ဝန်ခံရရင် သူနဲ့ညားပြီးတဲ့ နောက်တစ်ရက်ကတည်းက သူ့အပေါ်မှာ စိတ်ကုန်နေတာဖြစ်သည်။
ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ကြွားတာလဲမဟုတ်ဘူး.. ခင်ခင်က သူများတွေ
အချိုးအဆက်မျိုး။ လင်ရလိုက်တော့ လီးနဲ့ တည့်လို့လားမသိပါဘူး..သိသိသာသာကြီး ဖွံ့ထွားတက်လာလိုက်တာမှ နဲတဲ့အကိတ် မဟုတ်ဘူး။ ဖင်ကြီးတွေဆိုတာ ဖုတွဲ ကားဖောင်းနေတာများ ဘယ်ယောင်္ကျားမှ
လက်တစ်ဖဝါးအုပ်လို့ မကာမိနိုင်ဘူး။ နို့ကြီးတွေဆိုတာလည်း အသားတွေ တက်လာလိုက်တာ ဖူးမို့အိမောက်နေတာများ
ဘရာစီယာထဲကတောင် အပေါ်ကို လျှံပြီးထွက်နေတာ နို့သားကြီးတွေ ဝင်းအိနေတာပဲ။ စောက်ဖုတ်ဆိုတာကလည်း လီးပေါင်း အချောင်းနှစ်ဆယ် အစိတ် အလိုးခံခဲ့ပြီးတဲ့အပြင် လင်နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်
နေ့တိုင်းအလိုးခံနေရတယ်ဆိုလို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့ အခုကွဲလိုက်တဲ့ လင်ရဲ့ လီးသေးသေး.. ပဲမြစ်လေးဆိုတာတောင်မှ ခင်ခင့်စောက်ပတ်က ဆွဲစုပ်ညှစ်ယူ ပေးထားလိုက်ပြီဆိုရင် လီးတစ်ချောင်းလုံးက
တင်းကျပ်လာပြီး လီးရည်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ပန်းထုတ်ပစ်မိရတဲ့အထိ လိုးလို့ အရသာရှိတဲ့ စောက်ပတ်မျိုး။ အဝေးကပဲ ပစ်ဆောင့်ဆောင့် အနီးကပ်ပဲ တေ့ဆောင့်ဆောင့် ဆောင့်လိုးချက်တိုင်းကို ပင့်ခံနိုင်တဲ့ဖင်ကြီးတွေနဲ့ လီးဝင်တိုင်း အရသာရှိစေနိုင်တဲ့ စောက်ပတ်ကြီးက သူ့လီးသေးသေးလေးနဲ့ တစ်သက်လုံး အလိုးခံသွားရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင် အားမရနိုင် မတင်းတိမ်နိုင်ဘူးလေ။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ မဖြစ်မနေ လမ်းခွဲရမယ်ဆိုတာ ညားတဲ့ည.. စောက်ပတ်ထဲ သူ့လီးဝင်လာပြီ ဆိုကတည်းက ခင်ခင်သိနေလို့ ကွဲချင်ခဲ့တာပါ။ တဏှာကြီးတယ်ပဲ ပြောပြော လီးမက်တယ်ပဲ ပြောပြော သူဖင်အိုးဆုံကြီး ကွဲထွက်ပြိုဆင်းသွားအောင် သူ့စောက်ပတ်ထဲ ပြည့်သိပ်တင်းကျပ် ပြဲထွက်သွားအောင် လိုးခွဲပစ်မယ့် လီးမျိုးကြီးနဲ့သာ တစ်သက်လိုး အလိုးခံသွားချင်တဲ့ အာသာဆန္ဒကိုတော့ တစ်ပြားမှ မလျှော့ချင်ဘူး။ ဗမာလီးမို့ သိပ်အကြီးကြီး မဟုတ်တောင် အဖေ့လီးလောက်သာ ကြီးမယ်ဆိုရင် အရသာရှိရှိ အလိုးခံရမှာမို့ တော်ပါသေးရဲ့..။
အတွေးတွေထဲမှာ နစ်နေတော့ အိမ်ကို
ပြန်ရောက်နေတာတောင် သတိမထားမိနိုင်ပဲ အဖေ့လီးကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်လာတာနဲ့ မျက်နှာက ပြုံးစေ့စေ့လေးဖြစ်နေဆဲ
” အိမ်ရောက်ပြီလေ.သမီးရဲ့…ဘာမြင်လို့ ပြုံးနေရတာတုန်း..ခ်ခ် ဘာလဲ ဟိုရှေ့က တိုးပွားနဲ့ မိနက် လိုးနေကြတာကို အားကျလို့လား.. တိုးပွားကြီးက အလိုးကြမ်းလိုက်တာနော်..ခ်ခ်. ကြည့်ပါဦး..သူ့လီးကြီးနဲ့ ခွေးမလေးကို အသေပစ်ဆောင့်ပြီး သွင်းနေတာ ရက်စက်တယ် ဆောင့်ချက် ကြည့်..ကြည့်..ဝင်နေပြီ ဝင်နေပြီ “
အမေက သတိပေးတော့မှ ကားမောင်းနေတဲ့ အဖေ့ကို ခိုးကြည့်နေရာက တိုးပွားတို့ ခွေးလိုးပွဲဆီ မျက်စေ့ကို ရွှေ့မိလိုက်သည်။ အဲ
ဟုတ်ပါရဲ့..ခြံထောင့်မှာ ဟိုဖက်ခြံက ခွေးမမိနက် ကျောပေါ်လက်တင်ပြီး အိမ်က ခွေးထီးကြီး ဆောင့်နေလိုးနေတာများ သွက်လိုက်တဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ.. ခဏလေးထဲမှာ ဘယ်နှစ်ချက် ဆက်ဆောင့်သွားလဲဆိုတာ လိုက်ရေလို့တောင် မမီလိုက်ဘူး။ မိနက်ကလဲ တအီအီနဲ့ အသံတွေ ထွက်နေအောင်ညည်းပြီး ဆောင့်ချက်တွေကို တင်းခံနေတာ အားကျစရာကြီး..ခ်ခ်။
” အင်း ဟုတ်ပါရဲ့မေမေရယ်..ခိခိ..အို့. ခ်ခ်.. အားရပါးရကြီး လိုးနေလိုက်တာ..လီးကြီးက အရင်းထိ မဝင်သေးဘူးနော် မေမေ.. ဆောင့်တယ်.. ဆောင့်တယ်..အိ..အားဟား. သွက်သွက်ကြီး ဖိဆောင့်ထည့်ပစ်ပါလား တိုးပွားရဲ့… အရင်းထိ.အရင်းထိတော့မယ်.. အရင်းထိ ဝင်တော့မယ်..ဆောင့် ဆောင့် ဆောင့် “
ဖေဖေက ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အိမ်ထဲဝင်ဖို့
လှမ်းခေါ်နေတော့ အမေက အပြင်မှာ အငြီးပြေ လေညှင်းခံဦးမယ်လို့ ပြန်ပြောပြီး
အဖေ ခင်ခင့်ကို တစ်ချက်လှမ်းရှိုးတော့ မေမေမမြင်အောင် နှုတ်ခမ်းလေးကိုက် မျက်စေ့လေး တစ်ဖက်မှိတ်ပြရင်း ခွေးလိုးပွဲဆီ မေးငေါ့ပြလိုက်လေသည်။ အဖေက တဆတ်ဆတ်နဲ့ ခေါင်းညိတ်ပြပြီး အိမ်ထဲဝင်
သွားလို့မှ သိပ်မကြာပါဘူး.ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်သံ ကြားလိုက်ရတော့ အဖေလည်း ခွေးလိုးပွဲကြည့်နေပြီလို့ သိလိုက်လေသည်။
” ဆောင့်တုန်းပဲ သမီးရေ.. တိုးပွားကြီးက သိပ်လိုးအားသန်တာပဲ.ပစ်ပစ်ဆောင့်သွင်းနေတာ.. မြန်ချက် အားရတယ်..အဲ.ဆောင့်တယ် ဆောင့်တယ်.. ပိုသွက်လာပြီ..အဲ အဲ..လီးကြီးက အတုတ်ကြီးတော့်.ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်.. အရင်းထိဝင်တော့မယ်..အိုး..အူးဟူး..ကြမ်းချက်က..ကြိုက်တယ်ကွာ..”
ကြည့်နေမိကြတာ မေမေ့လက်က ခင်ခင့်ကို တင်းတင်းကြီး ဆုပ်ကိုင်လာသလို.ခင်ခင်ကလည်း မေမေ့လက်ကို တအားပဲပြန်ဆုပ်ညှစ်ထားသည်။ အာခေါင်ခြောက်လာလို့ တံတွေးကို အမြန်မျိုချပြီး
” အားဟား..ဟား..ဆောင့်တယ်အမေ ဆောင့်တယ် ဆောင့်တယ်.အူးဟူး..အာ့
မိနက်ကလည်း ငယ်ငယ်လေးနဲ့ တင်းနေအောင် တောင့်ပြီးခံတာအမေ..လိုးတယ် လိုးတယ်.. ဝင်ပြီအမေ.ဝင်သွားပြီ..လီး.. လီးကြီးအရင်းထိ ဝင်သွားပြီ..အဲ အဲ..ငြိမ်နေတယ် ငြိမ်နေတယ်.. မိနက်ကျောပေါ် ခေါင်းမှေးတင်ပြီး မှိန်းနေတယ်အမေ.”
မေမေ့မျက်လုံးတွေက ဝိုင်းစက်ပြောင်လက် အရောင်ထွက်နေသည်။
” အဲ.အဲ..လှိမ့်လိုက်ပြီ..လှိမ့်လိုက်ပြီ..ဟော.. ပူးသွားပြီသမီး..ပူးသွားပြီ..အဲ အဲ.ငြိမ်နေပြီ.. စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီးစိမ်ပြီး ငြိမ်နေကြပြီ “
” မိန်းမရေ..မြန်မြန်လာတော့ကွာ “
ခင်ခင့်ကို မလုံမလဲကြည့်ပြီး အမေ အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားလေသည်။